Bruce H. Lipton, PhD - သိပ္ပံနှင့် ဝိညာဉ်ကို ပေါင်းကူးခြင်း။
Bruce H. Lipton, PhD မှ
သိပ္ပံနှင့်ဝိညာဉ်ပေါင်းစည်းရေး | ယဉ်ကျေးမှုဖန်တီးမှုများအတွက်ပညာရေး၊ အားဖြည့်မှုနှင့်ရပ်ရွာ | Bruce H. Lipton, PhD ၏တရားဝင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်
Bruce Lipton ရေးသားခဲ့သည်
အစွမ်းထက်သည်။ ကြော့! ရိုးရှင်း! အဓိပ္ပာယ်ရှိသလောက်လက်လှမ်းမီနိုင်သောစတိုင်လ်တစ်ခုတွင်ဒေါက်တာဘရုစ်လစ်တန်သည်ဘဝနှင့်အသိဥာဏ်အကြားကြာရှည်စွာရှာဖွေခဲ့သော“ ပျောက်ဆုံးနေသောဆက်နွယ်မှု” ကိုဘာမျှမပေးပါ။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်သူကရှေးအကျဆုံးမေးခွန်းတွေကိုဖြေပြီးငါတို့ရဲ့နက်နဲသောနက်နဲသောအရာများကိုဖြေရှင်းသည်။ ဒါကိုကျွန်တော်သံသယမရှိပါဘူး ယုံကြည်ချက်ဇီဝဗေဒ ထောင်စုနှစ်သစ်၏သိပ္ပံအတွက်အုတ်မြစ်ဖြစ်လာလိမ့်မည်။
Gregg Braden New York Times အရောင်းရဆုံးစာရေးဆရာမ
ယခု Podcast ကို ပိုကောင်းအောင် ခံစားလိုက်ပါ။
သင့်ဘဝ၊ သင့်ကျန်းမာရေး၊ ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာနှင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် သဘာဝတရား၏ တိုးချဲ့မှုတစ်ခုအဖြစ် သင့်ဘဝ၊ သင့်ကျန်းမာရေးကို တွေးတောရန် အချိန်တစ်ခုရှိခဲ့ပါက၊ ယခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ချက်များ၏ စွမ်းအားကို မည်သို့အသုံးချပြီး ၎င်းတို့အား မေတ္တာ၊ ပျော်ရွှင်မှုနှင့် ကျန်းမာသောဝိညာဉ်ရေးသတ္တဝါများဖြစ်ရန် မည်သို့အသုံးပြုနိုင်မည်နည်း။
ဤအပိုင်းသည် ခေတ်သစ်ခေတ်၏ သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် ဒဿနပညာရှင်ကြီးများထဲမှ တစ်ဦးကို ပြသထားပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ အကြီးဆုံးပြဿနာမှာ အဘယ်နည်း (နှင့် အဘယ်ကြောင့်နည်း)၊ သင့်ဘဝ၏ တက်ကြွသော ဖန်တီးရှင်ဖြစ်လာပုံနှင့် အခြားအရာများစွာကို သင်လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အလေ့အထများ နှင့် Hustle
စစ်မှန်သောကျန်းမာသောဘဝတစ်ခုအတွက် သိပ္ပံပညာနှင့် စိတ်ဝိဥာဉ်ကို မည်သို့ခွဲ၍မရနိုင်သည်ကို မသေချာပါ။ ဒီလိုဆွေးနွေးမှုကို သံသယရှိပါသလား။ အဲဒါကို နားထောင်ပြီး တစ်ဖက်က ဘယ်လို ထွက်လာလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ပါ။
Bruce ၏အခမဲ့လစဉ်သတင်းလွှာအတွက်ယခုစာရင်းပေးသွင်းပါ။ သူ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗွီဒီယိုနှင့်သဘာဝကိုလေ့လာခြင်း၊ ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း၊ စိတ်နှင့်ရုပ်၊ microcosm နှင့် macrocosm၊ သိပ္ပံနှင့် ၀ ိညာဉ်ရေးရာတို့ကိုပထမ ဦး ဆုံးလက်ခံရယူပါ။
အနီရောင်ဆေးပြား သို့မဟုတ် အပြာရောင်ဆေးပြား? - Matrix ၏သိပ္ပံနှင့်ဒဿန
Bruce Lipton ၏ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ သတင်းလွှာ
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ရက် မနက် ၉း၀၀ မှ ၁၀း၃၀ ထိ…
ပြောင်းလဲခြင်းကမ္ဘာတွင် ရှင်သန်ခြင်း- ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိ ကောင်းကင်ဘုံကို ဖန်ဆင်းခြင်း သိပ္ပံ
ကျန်းမာရေး၊ အိမ်နှင့် နှလုံးဆိုင်ရာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းများ ရင်ဆိုင်နေရချိန်တွင် သိပ္ပံပညာ တိုးတက်မှုများသည် ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲစေနိုင်လောက်အောင် အစွန်းရောက်သော အတွေးအမြင်နှင့် နားလည်မှုဆိုင်ရာ တော်လှန်ရေးစစ်စစ်ကို ဖန်တီးနေပါသည်။ အကျပ်အတည်းက ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို မီးထိုးပေးတယ်။
မတ်လ 19 ရက်နေ့ မနက် 9:00 မှ 10:30 ထိ…
ဟန်းနီးမွန်းအကျိုးသက်ရောက်မှု- ကမ္ဘာမြေပေါ် ကောင်းကင်ကို ဖန်တီးပါ။
လေးရက်တာအတွင်း Bruce Lipton ၏ လေးနက်သော သွန်သင်ချက်များကို တွေ့ကြုံခံစားရန် ပိုမိုကောင်းမွန်သော နေရာတစ်ခုဖြစ်သည့် နံနက်တိုင်း နံနက် 9:00 မှ 2:00 နာရီအထိ လေးလေးနက်နက် သွန်သင်ချက်များဖြင့် ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်တွင် သင့်ကောင်းကင်ကို ဖန်တီးရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ဤရင်းနှီးသောနေရာတွင် စုစည်းပါမည်။ Bruce Lipton ထံမှ လမ်းညွှန်မှုနှင့် မေတ္တာ။
ယခု ၎င်း၏ 19 နှစ်မြောက်တွင်၊ New Living Expo သည် ကျန်းမာ၊ ပျော်ရွှင်မှုနှင့် စိတ်ဖိစီးမှုကင်းစင်ခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို သိရှိရန်နေရာဖြစ်သည်။ ကုန်စည်ပြပွဲတွင် စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ ဟောပြောပွဲများ၊ အကန့်များ၊ အရောင်းရဆုံးစာရေးဆရာများနှင့် ကျန်းမာရေး၊ အသိစိတ်၊ ဝိညာဉ်ရေးနှင့် သိပ္ပံနယ်ပယ်များတွင် သုံးရက်အပြည့် ပါဝင်ပါသည်။
ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် West Palm Beach ၏ လှပသောနေရာများတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်၏အကြီးမြတ်ဆုံးအလင်းရောင်အချို့မှ ဟောပြောချက်များနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများပါဝင်သည့် သိပ္ပံမှဝိညာဉ်ရေးရာအထိ သုံးရက်ခရီးအတွက် အသိစိတ်နှင့်လူ့ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာညီလာခံတွင် Bruce နှင့် သူငယ်ချင်းများနှင့်ပူးပေါင်းပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်အတွက်အမြင့်ဆုံးအလားအလာကိုဖော်ပြသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံသားများ၏ virtual အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုဖန်တီးရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးစိတ်များကြီးထွားမှုအတွက်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ခြေတစ်လှမ်းလှမ်းဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသသောသိပ္ပံပညာသစ်ကိုထောက်ခံသည်။
နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်ကျော်သုတေသနလုပ်ထားသောအခြေခံမူများနှင့်အလေ့အကျင့်များကိုအသုံးပြုပြီးသတိရှိသောအသွင်ပြောင်းမှုတွင်ပါ ၀ င်သောတိုးတက်သောအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခု၏အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာပါ။ ဒီမှာဝင်ပါ
Bruce မှတိုက်ရိုက်လစဉ်လှုံ့ဆော်မှုလမ်းညွှန်ချက်များ၊ လာမည့်ပွဲဖိတ်စာများနှင့်အရင်းအမြစ်အကြံပြုချက်များကိုအခမဲ့ရယူပါ။
မူပိုင်ခွင့်© ၂၀၂၁ Mountain of Love Productions မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။ · လော့ဂ်အင်